Dooddii u dambaysay: Trump, Clinton kee guushu raacday? - BBC News Somali
Dooddii u dambaysay: Trump, Clinton kee guushu raacday?
Image caption Dad xafiis Dimuqraadigu leeyihiin ku daawanaya doodda
Dooddani waxay ahayd mid uu Trump aad u doonayay si ay ugu noqoto fursaddii u dambaysay ee uu ugu qancin lahaa shacabka Maraykanka in ay ku aaminaan madaxtinimada dalka, waxaana ka muuqday murashaxan Jamhuuriga in uu ku dedaalayey in uu kasbado taageero badan.
Wuxuu isku dayey bal in uu si uun iskaga fogeeyo eedaymaha loo soo jeediyey ee ahaa in ay taariikhdiisa ku jirto in uu haweenka af-lagaadeeyo oo si xunna u laaco. Iyada oo natiijada ra'yi ururin uu sameeyay telefishanka doodda qabanayay ee Fox oo muujinaysay in Hillary Clinton, oo xisbigeedu talada dalka hayay siddeed sannadood, in ay isaga kaga haboontahay hogaaminta dalka oo ay "dalka u keeni karto isbeddel togan" ayey ka muuqatay Trump inuu doonayay in uu isu dhigo in uu isagu kaga habboon yahay.
Trump ayaa kobla hadlka ka dhex galayay haweenayda ay doodayeen oo xataa wuxuu la murmayay xidhiidhiyihii doodda, waxaanu eedeeyay dad uu ku tilmaamay in ay cadow ku yihiin. Hillary Clinton qudheeda ayuu ku eedeeyay inay beenaley tahay waxa aanu ku sheegay in ay tahay "haweenay xun".